Ha sugin in macruufka 13 aad u aado dhinaca mugdiga ah | Wararka IPhone
Ha sugin in macruufka 13 aad u aado dhinaca mugdiga ah
Toni Cortés | | Barnaamijyada IPhone, macruufka 13, Casharrada iyo buugaagta
Ha sugin in macruufka 13 aad u aado dhinaca mugdiga ah. Apple waxay ku darsatay hab mugdi ah cusbooneysiinteeda cusub ee iOS 13. Rafcaanka isticmaalka habka mugdiga wuxuu ku saleysan yahay laba shay: Wuxuu ku keydisaa batteriga bandhigyada OLED, indhahana wuu ku fiican yahay.
Inta aan sugeyno imaatinka macruufka 13 bisha Sebtember, waxaan ku tusayaa qaar ka mid ah barnaamijyada horey u qaadan kara bartooda mugdiga ah, iyo sida loogu dhaqaajiyo mid kasta oo iyaga ka mid ah. Marka hadda waxaad aadi kartaa dhinaca mugdiga ah ...
6 Buugaagta Apple
Haddii aad leedahay a Apple Watch waxaad hore u xaqiijin doontaa in aad codsi ku saabsan iPhone horeyba waa xaalad mugdi ah. Uma baahnid inaad halkan wax ku qabato.
Codsigan caanka ah wuxuu iskuxirayaa Kalandarka iCloud iyo xusuusinta hal, aad ugu raaxeysan in la isticmaalo. Qeyb ka mid ah waxay leedahay qaabkeeda mugdiga ah. Shaashadda guriga, taabo astaanta geerka iyo gab "muuqaalka cad". Ma aha dhammaan isku-xirnaanta mugdiga ah, kaliya qaybta faahfaahinta shukaansiga.
Waan jeclahay qaabka mugdiga ah ee Twitter. Tag goobaha, ka dibna shaashadda iyo codka, oo dhaqaajiso qaabka mugdiga ah. Waxa kale oo aad ikhtiyaar u leedahay qaabka mugdiga ah oo keliya habeenkii, ka dibna ku noqo qaabka iftiinka subaxa hore.
Haddii aad isticmaasho akhristaha warka, ogow inay sidoo kale kuu qaadi karto dhinaca mugdiga adiga oo leh laba qasabadood oo keliya. Tag liiska ku yaal geeska bidix ee hoose, ka dibna dooro habka habeenkii. Ma fududaan karin.
Facebook ayaa muddo dheer tan iyo markii uu bilaabay qaabkiisa mugdiga ah ee Messenger. Hadda waxaad ka heli kartaa badhanka ka dib marka aad taabatid boggaaga 'avatar'. Ka hooseeya badhankaas durba wuu soo muuqday.
Akhriska buug mugdi ah oo iftiinkiisu hooseeyo waa daal in la fiiriyo. Apple wuu ogyahay tan wuxuuna ku siinayaa ikhtiyaarka aad ku bedesho midabka asalka, xitaa madow. Markaad buug akhrinayso taabo astaanta "Aa", oo xulo midabka asalka ah ee aad ugu jeceshahay. Waxaad awood u siin kartaa habka habeenkii si otomaatig ah.
Tani waa muunad ka mid ah sida ay u janjeersato in la doorto isku xirnaanta madow lagu soo rogay codsiyo kala duwan. Iyadoo la adeegsanayo iOS 13, qaabka madow ee madow ayaa horeyba uga suurta geli doona nidaamka qalliinka, iyo dhammaan codsiyada la muujiyey, iyada oo aan loo baahnayn in mid mid loo dhaqaajiyo, isla markaana lagu qasbo asalka madow xitaa haddii codsigu aanu lahayn ikhtiyaarkan.
Shaki la'aan war weyn ayey u tahay Darth Vader iyo kuwa raacsan ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Ha sugin in macruufka 13 aad u aado dhinaca mugdiga ah